Fiofanana momba ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny orinasa - The Reward Foundation
Home Fampiofanana momba ny harena ara-pananahana ara-nofo
“Tsy maintsy manaporofo ireo mpitarika orinasa fa mandray andraikitra izy ireo amin'ny fampitsaharana ny fanorisorenana ara-nofo” hoy ny Vaomieran'ny Fitoviana sy ny Zon'olombelona.
… Fa ny fijerena matetika ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mifamatotra mafy amin'ny fihetsika mamoafady sy tsy tia vehivavy? Folo isan-jaton'ny lehilahy lehibe any Angletera no manaiky fa mampiasa sary vetaveta amin'ny Internet any am-piasana. Tsy toy ny aretin-toaka na zava-mahadomelina, ny fitondran-tena mamoa fady dia sarotra jerena fa ny vokatr'izany dia tsy dia manimba. Ny tovolahy tanora dia mora tohina amin'ny fampiasana an-tery ary, tovovavy mihombo hatrany.
Tamin'ny volana desambra 2017, ny Vaomieran'ny fitoviana sy zon'olombelona (EHRC) dia nanoratra tamin'ny sezan'ny FTSE 100 sy orinasa lehibe hafa milaza fa handray fepetra ara-dalàna izy ireo raha misy porofon'ny tsy fahombiazan'ny rafitra hisorohana, na hiatrehana ny fanorisorenana ara-nofo *. Izany dia nitranga ho valin'ny tabilao fanararaotana ara-nofo tany Hollywood sy Westminster, ary ny fanentanana #MeToo. Nangataka tamin'izy ireo izy mba hanome porofo momba ny:
fiarovana inona no ananany hisorohana ny fanorisorenana ara-nofo
inona ny fepetra noraisin'izy ireo hiantohana ny fahafahan'ny mpiasa rehetra mitory tranga misy fanorisorenana tsy misy tahotra valifaty
ny fomba fikasan'izy ireo hisorohana ny fanorisorenana amin'ny ho avy
Antsoy amin'ny asa
Ny fikambanana rehetra dia iharan'ny risika amin'ny olana ara-pananahana. Avelao izahay hanampy anao hamaly amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny famolavolana fomba fiasa iray manontolo hanalefahana ity risika ity. Manamboatra serivisy izahay mba hiarovana ny sarin'ny orinasa sy ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fitondran-tena mahamenatra.
Anisan'izany ny serivisy
Atrikasa mandritra ny tontolo andro ho an'ny matihanina momba ny fahasalamana sy ny mpiasa HR momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Nahazo fankatoavana avy amin'ny Royal College of GPs izy io. Atrikasa voalohany ao Edinburgh 23 Janoary 2018.
Fianarana antsasak'adiny ho an'ireo matihanina HR momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fanorisorenana ara-nofo, andraikitra ara-dalàna ary fanimbana laza. Ny mpandray anjara dia hianatra amin'ny alàlan'ny fandinihana tranga sy fikarohana momba ny fiofanana azo apetraka mba handray anjara amin'ny andraikitra ara-dalàna amin'ny orinasa iray hisorohana ny fanorisorenana ara-nofo amin'ny ho avy
Atrikasa antsasak'adiny na tontolo andro ho an'ny vondrona mpitantana 30-40 amin'ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana, amin'ny fitondran-tena eo amin'ny toeram-piasana, amin'ny andraikitra amin'ny heloka bevava manokana ary ny fomba fananganana faharetana ho fepetra fisorohana ny olana amin'ny fanorisorenana
Lahateny fampidiran-dresaka 1 ora momba ny haben'ny vondrona manazava ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana, amin'ny fitondran-tena any am-piasana, ny adidy amin'ny heloka bevava manokana ary ny fomba fananganana faharetana ho fepetra fisorohana.
The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ara-nofo ary Internet, dia asa soa iraisam-pirenena fanabeazana mandefa lahateny sy atrikasa amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana, fahazoana, fifandraisana ary heloka bevava. Izahay dia eken'ny Royal College of General Practitioners hanome fiofanana momba ny fampandrosoana matihanina mitohy amin'ity sehatra ity ho an'ireo matihanina amin'ny fahasalamana sy ireo hafa tompon'andraikitra amin'ny fahasalaman'ny mpiasa.
Ny CEO, Mary Sharpe, Advocate, dia nampihatra ny lalàna mifehy ny asa sy ny heloka bevava ary manana traikefa betsaka amin'ny fampiofanana ireo mpiasa eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Nandritra ny 9 taona dia nampianatra ireo mpiasa sy mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Cambridge izy tamin'ny famolavolana mpitarika manokana. Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa marobe koa izahay, anisan'izany ireo matihanina HR sy psikology.
Rehefa fantatry ny olona ny mety hitrangan'ny korontana ifotony mifandraika amin'ny fampiasana sary vetaveta, dia vonona kokoa handray andraikitra manokana amin'ny fanovana izy ireo. Ny fiofanana mifantoka amin'ny fotony dia tetika mahomby hisorohana na hampihenana ny fanorisorenana ara-nofo amin'ny ho avy.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa, miangavy mary@rewardfoundation.org Finday: +44 (0) 7717 437 727
* Ny fanorisorenana ara-nofo dia mitranga rehefa misy olona manao fihetsika tsy ilaina izay manana toetra ara-nofo ary misy tanjona na vokany fanitsakitsahana ny hasin'ny olona iray na fananganana tontolo mandrahona, mankahala, manambany, manala baraka na manafintohina ho azy ireo.
Ny 'natiora ara-nofo' dia mety handrakotra fitondran-tena am-bava, tsy am-bava na ara-batana ao anatin'izany ny fandrosoana ara-nofo tsy mendrika, ny fikasihan-tanana tsy mendrika, ny endrika fanararaotana ara-nofo, ny vazivazy, ny mampiseho sary vetaveta na sary, na fandefasana mailaka miaraka amina zavatra voajanahary.